Top 10 Paswọdu cracking Ngwaọrụ
Music Download Record Nyefee
1.Download Music Site
.YouTube Ka iTunes
.YouTube Ka iPhone
.YouTube Ka iPod
.YouTube Ka iPad
.YouTube Ka akporo ekwentị
.YouTube Ka Mac
.YouTube Ka PC
.1000+ Sites ka iTunes
.1000+ Sites ka iPhone
.1000+ Sites ka iPod
.1000+ Sites ka iPad
.1000+ Sites ka akporo ekwentị
.1000+ Sites ka Mac
.1000+ Sites ka PC
2.Record Stream Music Site
.Spotify Ka iTunes
.Spotify Ka iPhone
.Spotify Ka iPod
.Spotify Ka iPad
.Spotify Ka akporo ekwentị
.Spotify Ka Mac
.Spotify Ka PC
.Pandora Ka iTunes
.Pandora Ka iPhone
.Pandora Ka iPod
.Pandora Ka iPad
.Pandora Ka akporo ekwentị
.Pandora Ka Mac
.Pandora Ka PC
.Apple Music ka iTunes
.Apple Music ka iPhone
.Apple Music ka iPod
.Apple Music ka iPad
.Apple Music ka akporo ekwentị
.Apple Music ka Mac
.Apple Music ka PC
.Google Play Music ka iTunes
.Google Play Music ka iPhone
.Google Play Music ka iPod
.Google Play Music ka iPad
.Google Play Music ka akporo ekwentị
.Google Play Music ka Mac
.Google Play Music ka PC
.Rdio Iji iTunes
.Rdio Iji iPhone
.Rdio Iji iPod
.Rdio Iji iPad
.Rdio Ka akporo ekwentị
.Rdio Iji Mac
.Rdio Iji PC
.SoundCloud Ka iTunes
.SoundCloud Ka iPhone
.SoundCloud Ka iPod
.SoundCloud Ka iPad
.SoundCloud Ka akporo ekwentị
.SoundCloud Ka Mac
.SoundCloud Ka PC
3.Transfer Music Site
.iPhone ka iTunes
.iPhone ka iPod
.iPhone ka iPad
.iPhone ka PC
.iPhone ka Mac
.iPhone ka akporo ekwentị
.Android Na ekwentị iTunes
.Android Na ekwentị iPhone
.Android Na ekwentị iPod
.Android Na ekwentị iPad
.Android Na ekwentị PC
.Android Na ekwentị Mac
.iPad ka iTunes
.iPad ka iPod
.iPad ka iPone
.iPad ka PC
.iPad ka Mac
.iPad ka akporo ekwentị
.iTunes ka iPhone
.iTunes ka iPod
.iTunes ka iPad
.iTunes ka PC
.iTunes ka Mac
.iTunes ka akporo ekwentị
.PC Ka iPhone
.PC Ka iPod
.PC Ka iPad
.PC Ka akporo ekwentị
.MAC Ka iPhone
.MAC Ka iPod
.MAC Ka iPad
.MAC Ka akporo ekwentị
4.Manage Music Library
.Fix ITunes Music Tags
.Burn ITunes Music ka CD
.Fix ITunes Music ekpuchi
.Delete ITunes duplicated Songs
.Remove ITunes efu egwu
.Clean Elu iTunes Library
.Share ITunes Playlist
.Rebuild ITunes Library
.Transfer Playlist site na Ngwaọrụ ka iTunes
.Backup / Weghachi iTunes Library
Gịnị bụ paswọọdụ cracking?
Paswọọdụ cracking usoro-agụnye agbake a paswọọdụ si nchekwa ọnọdụ ma ọ bụ site data, ebute site ná site a na kọmputa usoro na netwọk. Paswọọdụ cracking okwu na-ezo aka ìgwè nke usoro eji na-paswọọdụ si a data usoro.
Nzube na ihe mere nke paswọọdụ cracking na-agụnye inweta ihe n'enweghị ikike ohere a na kọmputa ma ọ bụ usoro ọ pụrụ ịbụ mgbake nke echefu paswọọdụ. E nwere ike ịbụ ihe ọzọ mere nke na-eji paswọọdụ cracking Usoro nke bụ maka ule paswọọdụ ike otú hacker apụghị mbanye anataghị ikike n'ime usoro.
Paswọọdụ cracking a na-ejikarị rụrụ chere ugboro ugboro usoro nke kọmputa na-emetụta dị iche iche n'ịgwa nke paswọọdụ rue kpọmkwem egwuregwu.
Arụrụala Force Paswọdu cracking:
Okwu arụrụala ike paswọọdụ cracking nwekwara ike-ezo dị ka arụrụala ike agha. Arụrụala ike paswọọdụ cracking bụ iche na usoro nke guessing paswọọdụ, na usoro a software ma ọ bụ ngwá ọrụ na-emepụta a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke paswọọdụ n'ịgwa. Ihe ọ bụ a nzọ ụkwụ-na-njehie Usoro e ji mee site software iji nweta paswọọdụ ọmụma si usoro.
A arụrụala ike agha na-ejikari site hackers mgbe ọ dịghị ohere nke na-aghọgbu ezoro ezo usoro adịghị ike ma ọ site nche analysis ọkachamara iji nwalee ihe nzukọ netwọk nche .Nke usoro nke paswọọdụ cracking dị nnọọ ngwa ngwa maka obere ogologo okwuntughe ma n'ihi na ogologo ogologo okwuntughe akwụkwọ ọkọwa okwu agha Usoro ejikari.
Oge e site arụrụala ike paswọọdụ cracking software ịgbawa paswọọdụ bụ ejikari adabere n'elu ọsọ nke usoro na internet njikọ.
GPU Paswọdu cracking:
GPU bụ ndịna-emeputa nhazi unit, mgbe ụfọdụ, a na-akpọkwa visual nhazi unit. Tupu ekwu okwu banyere GPU paswọọdụ cracking anyị aghaghị inwe ụfọdụ nghọta banyere hashes. Mgbe onye ọrụ tinye paswọọdụ paswọọdụ ozi echekwara na ụdị kọmputa hashes na iji otu ụzọ na-hashing algọridim.
Na nke a paswọọdụ cracking Usoro iji GPU software na-a paswọọdụ maa na anya site hashing algọridim na tụnyere ya ma ọ bụ dakọtara ya na ẹdude hashes rue kpọmkwem egwuregwu.
GPU nwere ike igosi mgbakọ na mwepụ ọrụ ke ukem dị ka GPU nwere ọtụtụ narị isi nke na-enye oke uru na cracking paswọọdụ. GPU bụ ukwuu karịa CPU otú nke ahụ bụ ihe mere nke na-eji GPU kama CPU.
CUDA Paswọdu cracking:
CUDA compute n'Otu Ngwaọrụ Architecture bụ ihe nlereanya ka mmemme na a n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ computations ke ukem, kere site Nvidia maka graphic nhazi.
CUDA Paswọdu cracking agụnye cracking okwuntughe iji Graphics kaadị nke nwere GPU mgbawa, GPU nwere ike igosi mgbakọ na mwepụ ọrụ ke ukem otú ọsọ nke cracking paswọọdụ bụ ngwa ngwa karịa CPU.GPU nwere ọtụtụ 32bit ibe na ya na-arụ ọrụ a na ime nnọọ ngwa ngwa.
Anyị nwere ike mfe nweta CUDA site ọba akwụkwọ, ntụziaka na enyemaka nke dị iche iche mmemme asụsụ ahụ na-agụnye C, C ++ na FORTRAN.
Paswọọdụ cracking Ngwaọrụ
Nyere n'okpuru bụ ndepụta nke Top10 Paswọdu cracking ngwaọrụ.
1. Ken na Ebel: Top paswọọdụ cracking ngwá ọrụ maka Windows
Cain & Abel bụ otu n'ime n'elu cracking ngwá ọrụ maka paswọọdụ cracking na paswọọdụ mgbake maka Windows os.
Cain & Abel nwere ike iji usoro nke Dictionary Mmegide, arụrụala-Force na Cryptanalysis ọgụ ịgbawa ezoro ezo okwuntughe. N'ihi ya, ọ nanị na-eji adịghị ike nke usoro ịgbawa paswọọdụ. GUI Interface nke software dị nnọọ mfe ma mfe iji. Ma nwere nnweta mmachi, ngwá ọrụ nanị maka window dabeere usoro .Cain & Abel ngwá ọrụ nwere ọtụtụ ezi atụmatụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke ngwá ọrụ na-atụle n'okpuru:
Atụmatụ nke Ken & Abel:
Eji maka WEP (Wired Ẹkot Nzuzo) cracking
Nwere ike idekọ mkparịta ụka n'elu IP
Tagzi-eji dị ka Network Paswọdu sniffer
Ike idozi adreesị IP na Mac.
Ike ịgbawa verity nke hashes gụnyere LM na NT hashes, IOS na PIX hashes, okirikiri hashes, Rdp okwuntughe, na nza karịrị nke ahụ.
Na saịtị nke Download:
2. Jọn Ripper: Multi-n'elu ikpo okwu, Ike, mgbanwe paswọọdụ cracking ngwá ọrụ
John na Ripper bụ a free multi ma ọ bụ cross n'elu ikpo okwu paswọọdụ cracking software. Ya na-akpọ multi n'elu ikpo okwu dị ọ na-agwakọta dị iche iche paswọọdụ cracking atụmatụ n'ime otu ngwugwu.
Ọ na-isi-eji na ịgbawa na-adịghị ike Unix okwuntughe kamakwa maka Linux, Mac, na Windows. Anyị nwere ike na-agba ọsọ a software megide dị iche iche paswọọdụ encryptions gụnyere ọtụtụ paswọọdụ hashes ejikari hụrụ dị iche iche Unix nsụgharị. Ndị a hashes bụ des, LM hash nke Windows NT / 2000 / XP / 2003, MD5, na AFS.
Atụmatụ nke Jọn Ripper
Na-akwado na arụrụala ike paswọọdụ cracking na akwụkwọ ọkọwa okwu ọgụ
Multi n'elu ikpo okwu
E Nwere free maka ojiji
Pro version bụkwa dị na ọzọ atụmatụ
3. Aircrack: Fast na irè WEP / WPA cracking ngwá ọrụ
Aircrack bụ Nchikota dị iche iche ngwaọrụ eji maka WiFi, WEP na WPA okwuntughe cracking. Site n'enyemaka nke ndị a ngwaọrụ i nwere ike ịgbawa WEP / WPA okwuntughe mfe na n'ụzọ dị irè
Arụrụala n'ọrụ, FMS agha, na akwụkwọ ọkọwa okwu ọgụ usoro ike ga-eji na ịgbawa WEP / WPA okwuntughe. Ihe ọ na-anakọta na nyochara ezoro ezo ngwugwu mgbe ahụ iji ya dị iche iche ngwá ọrụ mgbape paswọọdụ nke ngwugwu. Ọ bụ ezie na aircrack dị maka Windows ma e nwere dị iche iche mbipụta na a software ọ bụrụ na anyị na-eji nke a na Windows gburugburu ebe obibi, n'ihi ya, ọ bụ ihe kacha mma mgbe anyị iji ya na Linux gburugburu ebe obibi.
Atụmatụ nke Aircrack
Na-akwado na ma arụrụala ike na akwụkwọ ọkọwa okwu ọgụ cracking usoro
Dị maka Windows na Linux
Dị na ndụ CD
4. THC Hydra: Otutu ọrụ nkwado, Network Nyocha esi
THC Hydra bụ a nri abalị ngwa ngwa netwọk paswọọdụ cracking ngwá ọrụ. Ọ na-eji na netwọk ịgbawa ime usoro okwuntughe.
Ọ ga-eji na ịgbawa okwuntughe nke dị iche iche ogbugba ndu gụnyere https, HTTP, FTP, SMTP, Cisco, CVS, SQL, SMTP wdg Ọ ga-enye gị nhọrọ na i nwere ike na-enye a akwụkwọ ọkọwa okwu faịlụ na e dere ndepụta nke kwere omume okwuntughe. Ọ bụ kasị mma mgbe anyị na-eji ya na Linux gburugburu ebe obibi.
Atụmatụ nke THC Hydra
Fast cracking ọsọ
Dị maka Windows, Linux, Solaris na OS X
New modul pụrụ kwukwara mfe welie atụmatụ
Na-akwado na arụrụala ike na akwụkwọ ọkọwa okwu ọgụ
5. RainbowCrack: New Innovation na Paswọdu Sherebaya esi
RainbowCrack software eji egwurugwu tebụl ịgbawa hashes, na ndị ọzọ okwu anyị nwere ike ikwu ọ na-eji usoro nke a nnukwu-ọnụ ọgụgụ oge-ebe nchekwa ahia maka irè na ngwa ngwa paswọọdụ cracking.
Nnukwu-ọnụ ọgụgụ oge-ebe nchekwa-ahia-anya bụ usoro nke Mgbakọ niile hashes na larịị ederede site na iji a họrọ hash algọridim. Mgbe calculations, nwetara rụpụtara na-echekwara na tebụl a na-akpọ egwurugwu tebụl. Usoro nke na-eke eke na egwurugwu tebụl bụ nnọọ na-ewe oge ma mgbe ya mere software na-arụ ọrụ nnọọ ngwa ngwa.
Paswọọdụ cracking iji egwurugwu table bụ ngwa ngwa karịa nkịtị arụrụala ike agha usoro. Ọ dị maka Linux na Windows arụ ọrụ usoro.
Atụmatụ nke Rainbow Crack
Nkwado verity nke Rainbow tebụl
Na-agba na Windows (XP / Vista / 7/8) na Linux ịwa usoro (x86 na x86_64)
6. OphCrack: Ngwá Ọrụ maka Windows paswọọdụ cracking
OphCrack eji ịgbawa Windows ọrụ okwuntughe na enyemaka nke egwurugwu tebụl na ndị dị na a bootable CD.
Ophcrack bụ kpam kpam free download, Windows dabeere paswọọdụ esi na-eji egwurugwu tebụl ịgbawa Windows ọrụ okwuntughe. Ọ na-ejikarị cracks LM na NTLM hashes. Software nwere mfe GUI na ike na-agba na iche iche nyiwe.
Atụmatụ nke OphCrack
Dị maka Windows kamakwa maka Linux, Mac, Unix, na OS X
Na-eji LM hashes nke Windows na NTLM hashes nke Windows Vista.
Egwurugwu tebụl dị free na-adị mfe n'ihi na Windows
Ka mfe usoro nke cracking Live CD dị
7. Brutus: A arụrụala ike agha esi maka ime usoro
Brutus bụ kasị, ọtụtụ mgbanwe, na kasị ewu ewu na software eji ịgbawa ime usoro okwuntughe. Ọ maa paswọọdụ site n'itinye dị iche iche permutations ma ọ bụ site na iji akwụkwọ ọkọwa okwu.
Ọ ga-eji maka dị iche iche netwọk ogbugba ndu gụnyere HTTP, FTP, IMAP, NNTP na ndị ọzọ na ụdị ndị dị otú ahụ dị ka SMB, Telnet wdg Ọ na-enye gị ihe owuwu nke na-eke gị onwe gị Nyocha ụdị. Ọ gụnyekwara mmezi nhọrọ nke ibu ma malitegharịa, otú usoro nwere ike kwụsịtụ mgbe chọrọ ma ị nwere ike ịmaliteghachi usoro mgbe ị chọrọ.
Ọ bụ nanị maka windows ime usoro. Ngwá Ọrụ nwere mmachi na ọ bụghị e emelitere ebe 2000.
Atụmatụ nke Brutus
Dị maka Windows
Ike ga-eji dị iche iche na netwọk ogbugba ndu
Ngwá Ọrụ nwere ọtụtụ ezi amara atụmatụ
Nkwado sock proxy n'ihi na ụdị authentications
Ikike nke njehie njikwa na mgbake
Nyocha engine bụ multi ogbo
8. L0phtCrack: Smart ngwá ọrụ maka Windows paswọọdụ mgbake
Dị nnọọ ka OphCrack ngwá ọrụ L0phtCrack bụkwa a Windows okwuntughe mgbake ngwá ọrụ na-eji hashes ịgbawa okwuntughe, na ụma atụmatụ nke arụrụala ike na akwụkwọ ọkọwa okwu ọgụ.
Ọ na-ejikarị rite ohere ndị a hashes si directories, netwọk sava, ma ọ bụ na ngalaba controllers. Ọ bụ ike nke na-eme hash mmịpụta si 32 & 64 bit Windows usoro, multiprocessor algọridim, usoro ihe omume, na pụkwara ịrụ nyopụta na nlekota netwọk. Ma ọ bụ ka ndị kacha iji paswọọdụ auditing na mgbake software dị.
Atụmatụ nke L0phtCrack
Dị maka Windows XP, NT, 2000, Server 2003, na Server 2008
Nwere ike na-arụ ọrụ ma na 32- na 64-bit gburugburu
Extra atụmatụ nke oge eme auditing on kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa bases
Mgbe ọsọ ọ na-enye zuru ezu oditi Summary na akụkọ peeji
9. Pwdump: Paswọdu mgbake ngwá ọrụ maka Windows
Pwdump bụ n'ezie dị iche iche Windows omume na-eji na-enye LM na NTML hashes nke usoro ọrụ akaụntụ.
Pwdump paswọọdụ esi bụ ike nke na adịrị LM, NTLM na LanMan hashes si zube na Windows, bụrụ na ọ bụrụ Syskey bụ ndị nwere nkwarụ, software nwere ikike wepụ na ọnọdụ a.
Software bụ update na ụma atụmatụ nke paswọọdụ akụkọ egosipụta ma ọ bụrụ akụkọ ihe mere eme dị. Egwute data ga-abụ dị na ụdị na bụ dakọtara na L0phtcrack.
Na nso nso software a na-emelite ọhụrụ version akpọ Fgdump dị ka Pwdump bụghị-arụ ọrụ ezi mgbe ọ bụla antivirus omume na-agba ọsọ.
Atụmatụ nke Pwdump
Dị maka Windows XP, 2000
Ike mmezi atụmatụ ndị dị na ọhụrụ mbipute nke Pwdump
Ikike na-agba ọsọ multithreaded
Ọ pụrụ ịrụ cachedump (jiri nzere kpofuru) na pstgdump (Chebe nchekwa dump)
10. Medusa: Speedy netwọk paswọọdụ cracking ngwá ọrụ
Medusa bụ ime usoro paswọọdụ cracking ngwá ọrụ dị nnọọ ka THC Hydra ma ya kwụsie ike, na ngwa ngwa nbanye ikike ahọrọ ya n'elu THC Hydra.
Ọ bụ ngwa ngwa arụrụala ike, yiri na modular ngwá ọrụ. Software nwere ike igosi arụrụala ike agha megide multiple ọrụ, ụsụụ ndị agha, na okwuntughe. Ọ na-akwado ọtụtụ ogbugba ndu gụnyere AFP, HTTP, CVS, IMAP, FTP, SSH, SQL, POP3, Telnet na VNC wdg
Medusa na-pthread dabeere ngwá ọrụ, nke a mma gbochie isi oyiri nke ọmụma. All modul dị ka otu nọọrọ onwe ha .mod faịlụ, otú ọ dịghị mgbanwe a chọrọ ịgbatị ndepụta na-akwado ọrụ maka arụrụala ese agha.
Atụmatụ nke Medusa
Dị maka Windows, SunOS, BSD, na Mac OS X
Ike nke na-arụ Eriri dabeere yiri ule
Ezi atụmatụ nke Mgbanwe ọrụ ọsọ ọsọ
Ruru yiri nhazi ọsọ nke cracking dị nnọọ ngwa ngwa
Top 5 Windows Paswọdu Iweghachite Ngwaọrụ
PhotoRec Tutorial: Olee otú Jiri PhotoRec
Office Paswọdu crackers ịgbawa Excel / Okwu / PPT Paswọdu
TOP 10 Best CD BURNERS
The 5 Kasị ewu ewu Ngwa ọcha Mac
Top 30 FLAC ọkpụkpọ maka windows / Mac / iOS / android
Top 30 avi Player maka Windows / Mac / iOS / Android
Top 20 SWF Player maka Windows / Mac / iOS / android
Top 30 MKV Player maka Windows / Mac / iOS / Android
Top 30 mp3 egwuregwu na 2015
Top 20 free mp3 video converters
Mepụta Animated Flash Screensaver na Screensaver Onye kere
> Resource> Top List> Top 10 Paswọdu cracking Ngwaọrụ